“Kora Sabaa” seeraan alaa yeroo ammaa kana Waajjira Muummee, Finfinneetti taasifame ilaalchisee Ibsa ABO – Adda Bilisummaa Oromoo
Gaafa: O3/12/2021 Labsi:6112/2019
Gocha waliin dhahiinsaa garee ABO irraa cabsatanii bahan, kan qaama caasaa dhaabaa alaan ijaaramanii fi maallaqaan gargaaramaniin uumameen, Dhaabni keenya keessumaa Hoggana ilaalchisee, dhimma kana qulqulleessuuf jecha Korri Sabaa Addaa akka godhamu Boordiin Filannoo Biyoolessaa Itiyoophiyaa, Dhaaba keenyaaf akeekee jira. Boordiin Filannoo Itiyoophiyaas filannoo itti aanu dura yaada wal dhahaa dhimna Hoggana ABO dhalate jedhu furuuf Kora Sabaa gaggeessuuf yaada qabnu deeggaree jira. Haaluma kanaan, Koreen Qopheessituu ABO armaan dura Gumii Sabaan filame, yeroo sanarraa eegalee, bu’uura heera keenyaa fi dambii Korai Sabaa ittiin gaggeessaniin raawwii isaatiif hojjechaa jira. Dhimmuma kana ilaalchisee Boordiin Filannoo Itiyoophiyaa xalayaa seera qabeessaan beeksifamee jira. Yeroo dhiyoo keessattis korichi ittin dhiyeenyaan hojjechuu fi quunnamtii sirnaawaa taasisuu jalqabee jira. Fakkeenyaaf sochii itti jirru fi hanga milkoofne Boordii Filannoo Itiyoophiyaatiif sirnaan beeksisaa jirra. Haaluma wal fakkaatuun, Boordiin Filannoo Kora Sabaa Dhaabni keenya godhachuuf haala akka mijeessuuf Dhaabni keenya itti iyyatee jira. Addatti Waajjira Muummee keenya Finfinneetti argamu kan Poolisii Magaalaa Finfinneen cufamee jiru banuun fa’a keessatti argamu. Kana malees, ABO’n gaafa 25/02/2021 xalayaa idilee Boordii Filannoo Itiyoophiyaatiif barreesseen Waajjiraalee Muummeen keenya akka nuuf banamanii fi Kora adeemsisuuf haala mijataa akka nuuf uumu gaafannee jirra.